Laanta Socdaalka oo diidmo ka saftay Soomaalida dacwada xareysatay | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa isbuucyadii ugu dambeeyay waxay diidmo ka saftay Soomaalidii reerahooda u dacwooneysay ee codsiga xareystay. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa i soo booqday dad badan oo la yaaban diidmada isku mid ah ee isku waqtiga loo soo diray dadka oo dhan.
Sidii caadada noqotay ilaa markii la diiday mideynta reeraha Soomaalida ayaa Laanta Socdaalka waxay Somaalida ka dalbatay in ay soo bandhigaan warqado kala duwan oo ay ku cadeynayaan xiriirkooda iyo xitaa masuuliyada ay ka yihiin caruurtooda. Dadkii aan la kulmay ayaa waxaa ka mid ahaa aabbe lagu yiri noo keen warqado cadeynaya in aad caruurtaada masuul ka tahay.
Inkastoo rajada Soomaalida khaarkood ay isbedashay ka dib markii lagu dhawaaqay in la mideynayo reeraha Soomaalida ayaa waxaa u maleysaa in dadka khaarkood ay ilaabeen in aysan waqtiga hada la joogo wax isbadalin oo Laanta Socdaalka ay ku soconeyso sharcigii hore oo keliya. Ilaa baarlamaanka ama Dowlad Sweden ay go’aan rasmi ah soo saaraan ayaa Laanta Socdaalka waxay tahay mid qasban ku socoshada wadadii hore xitaa iyaga oo og in ay ku adagtahay dadku in ay fahmaan.
Warqadkasta oo hada loo diro ayay ka soo qaadayaan mid aan macno lahayn maadaama aysan aqoonsaneyn cadeymaha Soomaaliya isla markaana uusan jirin isbedel cusub. Hadaba maxaa la kudboon dadka laga codsaday in ay warqadaha soo bandhigaan? Su’aashaas ayaanan jawaabteeda ka helin Laanta Socdaalka balse waxay ila tahay in labo ay furantahay hada, in layska dhaafo xiriirkooda oo dib loo bilaabo dacwadada July 1 2012 ka dib ama in aad xiriirka sii wadaan oo lagu maaweeliyo warqado oo aad u sheegto in aad diyaar u tahay in DNA lagaa qaado iwm.
Gudoomiyaha SD oo sheegay in uu xal u hayo isdhexgalka
Shirkadaha ku shaqaysta dadka sharci la’aanta ah oo la ciqaabayo [Video]
A.S.C./ dhaman walalaha somaliyet iyo bahweynta somaliska.com/salantas kadib jimcale,walal macqul matahay in hada ey xestan dadki horo didmada losiyay macnahayga madama boroseska usucokaro 6-8,bilod si ey ugu so adan waqtiga rajada ey shegen mase waxa qasab ah in laxareyo 2012-6- hadi ey macqultahay in aad sideykulatahay ad iso shekto fikirkaga wan u.bahanahay thnxs
Asc aqyarta sln kadib sxbkey jimcaale waxan raba enan weydiiyo arinta kusabsan dadkan wax iskudhalin xalkooda ama meshey waxmarayan hada kahor sxb ada dhahay waxi sosiyada ana edin lasosocod sinaayo ee jimcale balwax nasoo dheh sxboow
October 10, 2011 at 10:51
Nuradin waxay ila tahay in labadaba ay kuu furantahay in aad hada xareyso iyo in aad xareyso marka sharciga la badalo. Haddii aad hada xareyso balse ay go’aan gaaraan ka hor July waxay u badantahay diidmo waayo iyaga sharci cusub ma soo gaarin. Balse waad ku celcelin kartaa oo racfaan ayaad qaadan kartaa.
Waxaan filayaa in marka sharciga la badalo ay muhiimada siin doonaan dadkii kiisaskooda hore loo diiday oo dhamaan dib loo eegi doono.
Abdiraxman waxcusub hada ma jiraan, waxaan sugeynaa waa in dowladu ay soo bandhigto mooshin la xiriira arintaan markaas ayaan ka hadli karnaa waxa laga yeelayo dadka oo dhan.
October 10, 2011 at 11:34
marka hore alle aya mahad iska leh ,thanks all somaliska. ka bacdi wax walbo xagg alle aye ka dhaman donta illahey muradkeyna ha no sahlo. ani waxa ahay aabe wilkisa o labo sano jirin lo diday. hada labo sano ayo buxiyay wilkeyga marka e interviewka marayan waxa o jiray wilkey 16 dagar bas hada neh labo sano aya u buxsantay marka illah ban tala saranay wax nakama halawi donan insha allah
October 11, 2011 at 00:11
asc jimcaale walaal waxaan ku weydina adigoo raali iga ah aniga labo week kahor ayan caruurteyda ugu soo xareeyay sacudiga marka wali jawaab inter fayu ma marin marka maxa iguka talin laheyd waba ka naxay warkaan ee walaalow isoo jawaab
Wsc, walaal wax saaid ah oo laga walwalmo ma jiraan, haddii ay ogolaasho ku siyaan alxamdulillah haddii kalena waxaad ogaaneysaa in bisha July ee sanadka soo socda la furayo oo wixii waqtigaas ka horeya layskuma halayn karo. Waxa keliya ee kuu furan waa ina ad sugto oo aad aragto jawaabtooda.
Umu Maxamed says:
A.S.C. Waxaan idinku Salaanta Islaamka salaan kadib
Anigu waxay ilatahay in aan Allah talada saarano oo
Aan kabaxno gaalada warkeeda wixii Alle noo xukumo
Waan heleynaa Inshaa Allaah wabilaahi towfiiq
Ninkeyga Kaliya hadii ay i keeni lahayeen Galadan Faraxad ayaa lasuuxi laha Orebra Qaboow igu dilay
Lkn waxi iqoran ma gafaai
October 11, 2011 at 19:41
asc waan idin salamay aqyaarta reer somaliska waxaan aad ugu qoslay walasheey muniira kkkkkkk cadi matahid runta iskasheega
October 11, 2011 at 21:16
dulqad aloban hanyahay walalayal
Waa idinsalamay dhamantin asxabta somaliska .salan kadib walal jimcale waxan ku waydina aniga waxan raba in an carurtayda u xareyo sanadkan dhamadkisa wayo waxa la isku qabta aya lay shegay 3bilod o fomka ah 2bilod na wa intervuga marka maxaraynkara intas o dhan wax qadanaysa biloyin marka maxaraynkara waqti badan ayay qadanaysaye jwb dear jimcale
csalan xusen says:
October 12, 2011 at 12:06
waad salaamantihiin, aniga waxaan ka mid ahay dadka loo diiday ilmohooda weliba weekan hada ha ku jirno. waxaanan idin sheegayaa hadii aan la helin dowlad somaliyed aniga waxan aaminsanahay in wax noo hagagaya aysan jirin marka xooga ha la saaro sidii somaliya ay ku heli lahayd dowlad xoog leh oo wax ka qaban karta dhibaatada dalkeeda iyo dadkeeda oo dhan heysata waad mahadsantihiin.
asa.dhamaan shaqalaha web ka somaliska iyo akhristiyaashaba. salaan kadib waxaan jimcaale kuweydiin su aashan.
waxaa aniga iyo carruurtayda oo jooga sweden September 2010 kii la iga qaaday DNA waxaynaiisheegeen in ay cadahay inaan dhalay caruurtan. maalmo kadibna waxay xaaskayga udireen waraaq ay dhahayaan dacwadan waan kaa xirnay dib dambana umsoocelin kartid. waxaana horey la iisiiyey 3 diidmo oo aan xareeyey. marka midan ah dacwadan amakiiskan waan xirnay maxaan qaban kareaa hadda maadaama rajo fiican hadda lafilayo sannadka cusub 2012 da.
waa mahsantahay walaal jawaab fadlan igasii
nada bulale says:
October 13, 2011 at 10:18
Awr walaal jimcaale waan kusalaa mey waad kumahasantahey sida hagar la aan taa oo aad macluumaadka jira noogusoo gudbisey. waxaan nahey famil hooyo iyo aabe iyo 3 cuur ah jaan halkaan kujoognaa waxaa iga maqan 4 caruura dhiigii waa la iga qaadey 2010 04 20 marka waxaa jirta gabadh iga qaan gaa reysa 20120615 marka walaal maxaa ilagudboon waxey furayaan sharciga 201207o1 maxaan sameeyaa walal malaga yaabaa iney iisoo raaciyaan walaal talo isoosii qeyr alaha kusiiyee mahadsanid
October 22, 2011 at 12:38
insha allah kheer aya heleyna sanadka so socdo wa hadi u alle idmo yarabii ada gacmaha ku horsanay illaheyow